Fivadihan’ny toetr’andro: miantraika amin’ny toekarena sy ny fahasalamana | NewsMada
Tsy tambo isaina ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro amin’ny toekarena eto Madagasikara. Mijery vahaolana hatrany ny sampandraharaha famantarana ny toetry ny andro, mampanao fanadihadiana, saingy misy sehatra hafa mbola atao laharam-pahamehana.
Efa loza mihatra fa tsy loza manambana na mitatao intsony ny fivadihan’ny toetr’andro amin’ny toekarena. Hita izany amin’ny fambolena, ny fiompiana, ny ala, ny rano, ny jono, miantefa any amin’ny fahasalamam-bahoaka. Amin’ny ankapobeny, voadona avokoa ny faritra rehetra fa tena voa mafy mila vahaolana sy tetibola mifandraika amin’izany Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy, sy Atsimo Andrefana.
Betsaka ny fahavoazana hita manimba ny harena voajanahary noho ny tsy fahampian’ny tetibola na ny tsy fisian’ny tetibola mihitsy hiatrehana izany, araka ny fikarohana ataon’ireo teknisianina momba ny famantarana ny toetr’andro. Tsy misy fotodrafitrasa, toy ny lalana, hanajariana ny fihariana lasa miteraka fahantrana any amin’ny tontolo ambanivohitra. Antony iray lehibe manapotika ny ala sy ireo zavaboahary samihafa.
Anisan’ny fotodrafitrasa tsy ampy ny herinaratra, mampihitsoka ny ankamaroan’ny mponina tsy mahara-baovao sy fanentanana ho fiarovana ny tontolo iainana. Voalazan’ireo teknisianina fa ireo tompon’andraikitra eny anivon’ny governemanta sy ny minisitera samihafa, tsy manana politika mirindra sy mifameno amina sehatra sahaniny: lalana, fambolena, herinaratra, rano, ala …
Raha hisy ny tena fampiharana ny tetikasa
Tsara ho fantatra anefa fa nahazo famatsiam-bola avy amin’ny Tahiry eran-tany momba ny tontolo iainana sy ny Pnud ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Tetikasa ho fiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro any ambanivohitra amin’ireo faritra voalaza. Misy ny rafitra misahana izany (BN-CCCREDD)*. Tetikasa atao hifandraika amin’ny fandaharanasa hiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro (Panacc)*any amin’ireo faritra voalaza.
Anatin’izany tetikasa izany ny fanangonam-baovao eo anivon’ny sampandraharaha famantarana ny toetry ny andro. Miainga avy amin’ny asan’ny teknisianina ny famaritana ny politika ankapobeny eo anivon’ny minisitera isanisany ho fiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro, raha hisy ny tena fampiharana izany ho fiarovana ny toekarena sy ny fahasalamam-bahoaka.